Home Wararka Taliye boolis oo lagu dilay ismiidaamin gudaha Muqdisho
Taliye boolis oo lagu dilay ismiidaamin gudaha Muqdisho
Faah faahin Qarax oo ahaa Gaari Ismiidaamin ah ayaa lagu weeraray Saldhiga booliska degmada waaberi oo ku yaala Gargaarka Isgoska Dabka Qarax ayaa geystay Qasaaro dhimasho iyo dhaawac
Taliyihii booliska degmada Waaberi, Axmed Baashane oo loo garan ogaa Calooley, ayaa lagu waramay in fiidnimadii Axada, 9-ka May, lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa.
Qaraxa oo dhawaqiisa laga maqlay qaybo kamid ah caasimada ayaa ka dhacay saldhiga booliska degmada Waaberi oo ku yaala wadada Maka Al Mukarama ee magaala madaxda Soomaaliya ee Muqdisho.
Illo wareedyo dhanka ammaanka ah oo magacyadooda uga gaabsaday in aan loo ogoleyn la hadalka saxaafadda ayaa u sheegay MOL u xaqiijiyay in ismiidaamiyaha uu galay gudaha saldhiga.
Mas’uuliyiinta amniga ee MOL la hadlay ayaa ka cabsi qaba in waxyeeladda ay kasii badan karto inta haatan la ogyahay maadaama “naftii haligaha uu dhex-galay saraakiil iyo askar badan oo goobta joogtey”.
Sawirro iyo muuqaalo laga soo qaadey goobta oo soo gaaray MOL ayaa go’aansanay in aan la baahin, sawirada ayaa wax yeeli kara niyadda shacabka isla markaana niyad jab keeni kara. Waxaa MOL aay go’aansatay in aanan baahin sawirada meydad badan oo yaala wadada.
Ma jirto koox illaa haatan dusha saaratay mas’uuliyadda falkaas. Hasa ahaatee, dhacdooyinka noocaan ah waxaa looga bartay maleyshiyadda Al-Shabaab ee gacansaarka la leh ururka Al-Shabaab.
Marxuum Calooley ayaa xilka taliyaha booliska degmadda Waaberi waxaa loo magacaabay dhowaan, isaga oo bedelay Mooshin oo kamid ah dadka loo haysto dilka guddoomiyihii degmada Hodan, Dhagajuun.